Iyi ndiyo iPhone 7, ese maficha echishandiso chitsva | IPhone nhau
Iyi ndiyo iPhone 7, ese maficha echishandiso chitsva
Apple ichangobva kuunza kwatiri tese iyo nyowani iPhone 7 mune ayo maviri akasiyana, achitamba kupenya kunoshamisa kwatisina kuona kubva ku iPhone 4, uye ndiko iyo nyowani "jet nhema" modhi yatisiya isu tese tisina remuromo. Zvichakadaro, ichi hachisi chega chitsva, michina ichagamuchira nyowani uye yakakosha kurapwa, panguva imwechete iyo bhatani reKumba rakagadziriswa mukati kuti riwane 3D Kubata kugona nekuda kwekuvandudzwa Taptic Injini. Ziva zvese nezve iyo iPhone 7, iyo ichatibvumidza isu kutora mukana uzere neiyo yega yepanyama bhatani bhatani. Zvichakadaro, iyo mbiri kamera pane iyo Plus modhi yakaitikawo.
Nekudaro, isu hatina kuda kupotsa imwe yenyaya dzakakodzera kwazvo, iyo iPhone 7 mune ayo maviri akasiyana haina mvura yakazara, IP67 certification.
1 IPhone 7 uye iPhone 7 Plus kamera yekuvandudza
2 Iyo skrini yakagadziridzwawo
3 Vatauri veStereo uye yekuonekana ne 3,5mm jack
4 AirPod dzinobatana nepati zvakare
5 Nyowani Hardware
6 Yakagadziridzwa bhatiri, mutengo uye kuwanikwa
IPhone 7 uye iPhone 7 Plus kamera yekuvandudza
Iyo kamera haisi kumashure kumashure, 50% yakawanda kuvhura kupfuura mune yapfuura modhi, uye zvese zvishandiso, zvakajairwa uye zvinowedzerana, zvichave neyakajeka mufananidzo kudzikamisa, ichiperekedzwa neIchokwadi Tone kupenya uye yekumhanyisa sensor 60% nekukurumidza kupfuura yapfuura. Iyo kamera yave iri chimwe chezvikamu zvakakosha, vakomana veCupertino vatora zvakanyanya, vakatowedzera API iyo inobvumidza kuchengetedza mafoto muRAW. Asi izvi hazvisi zvese, iyo yekumberi kamera ichave ne otomatiki mufananidzo kudzikama uye 7MP kuitira kuti tikwanise kutora yakanakisa selfies. Iyo haina kuwedzera yekumashure kamera, iyo inoramba iine 12MP yakazara, kunyangwe hombe hodhi system inoisimbisa iyo.
Panguva ino, iyo iPhone 7 Plus kamera inoratidzira maviri 12MP kamera, imwe kamera ine inozivikanwa se "fisheye" lens, nepo imwe ichichengetedza iyo yechinyakare tarisiro, ichibvumira mafoto aine angangoita ehunyanzvi anotarisa. Bhatani idzva rinozoonekwa pane kamera rinotibvumira kuti tiite inonakidza Optical Zoom uye ingangoita pasina kurasikirwa nehunhu zvachose. Iyi zoom yakagadziridzwa kusvika kana kane zvichibva pasystem yapfuura maererano neApple executive timu. Vanoda mapikicha vari kuzopedzisira voda iyo nyowani iPhone kamera. Iyo yekuvandudza mune yakaderera mwenje mamiriro ari pachena, yakajeka post-kugadzirisa dambudziko rakakwevera iyo iPhone 6s.
Iyo skrini yakagadziridzwawo
Iyo nyowani skrini ichave iine 25% kuwedzera kupenya, nepo iwo mavara achiwedzera kuwedzerwa, mune yechokwadi Samsung dhizaini, kusanganisira nyowani yekuchengetedza mavara masystem, ese akagadzirwa mukubatana pamwe neiyo Instagram timu, inozivikanwa kwazvo pasocial network pasirese. Uku kusimudzira kunozivikanwa se "Wide Colors Screen" uye anovimbisa kuti mashandiro matsva eiyo 3D Kubata kweruoko rwekhamera uye kugadzirisa kwescreen inoshandura mafungiro eAMOLED emakore apfuura, ichipa "kupenya kwakakosha" kune iyo mivara mitsva, iyo yagara iri kuzadza. yakawedzera. 4.000 mamirioni mavara anoenda neApple nyowani yekushandisa system, panguva imwechete iyo iyo skrini, kunyangwe iri LCD, ichabata zvese kutarisisa.
Vatauri veStereo uye yekuonekana ne 3,5mm jack
Runyerekupe rwakazadzikiswa, iyo 3,5mm Jack inonyangarika, panguva iyoyo muiyo iPhone 7 uye iPhone 7Plus bhokisi tinogona kuwana Lighnign EarPods, pamwe neRightning-Jack 3,5 yekubatanidza adapta kuitira kuti pasave nemunhu anogona kunzwa kusarurwa.
Masipika, panguva iyi, anova kumberi, aine stereo odhiyo odhiyo sisitimu. Apple inoenderera ichipa nhau dzeiyo iPhone 7 iyo yanga isiri mukati meguhwa, uye isu tese tiri kunyatsofara. Zvinotaridza kuti nhanho kuenda ku Mheni kubva ku3,5mm Jack ichaunza matambudziko mashoma kupfuura zvataitarisira, uye Apple yakafunga kusatitorera dzimba pamwe nemaadapter. Ehezve, ivo vatora iwo mukana wekutsoropodza jack yechinyakare zvachose.
AirPod dzinobatana nepati zvakare
Apple's wireless mahedhifoni aigona kunge asipo, iyo Cupertino kambani yakamisikidza kuuraya tambo uye iri kubudirira, yakagadzira maviri akazvimiririra uye zvachose asina waya mahedhifoni akatakurwa mubhokisi rakakosha uye anosanganisira maikorofoni. Kuti ubatanidze ivo, zvichave zvakakwana kuvaunza padyo neiyo iPhone uye ichatora mukana weiyo NFC tekinoroji, ine dhizaini yakanyatso fanika neyechinyakare EarPods. Apple yakagadzira chikoro neaya mahedhifoni matsva. Iine chip nyowani inonzi W1 yakagadzirwa neayo. Aya mahedhifoni inyanzvi yehunyanzvi.
Iyo processor inonzi sa A10 Fusion inovimbisa kusvika pa50% simba rakawanda kupfuura iro rapfuura, Inoumbwa nema processor mana, maviri ezvishoma ekushandisa uye maviri akatsaurirwa simba. Iwo maviri ekutanga anodya chete 1/5 yeizvo zvinodyiwa nevamwe vese. Panguva imwecheteyo, iyo processor yemagetsi yakagadziridzwa, yakabatanidzwa neA10 chip uye inonzi processor ine simba kwazvo yatinogona kuwana mune mbozhanhare.
Mumitambo yemavhidhiyo bvunzo isu takakwanisa kukoshesa zvinoshamisa magiraidhi ekuita, zvisati zvamboonekwa pane mbozhanhare.
Yakagadziridzwa bhatiri, mutengo uye kuwanikwa
Ini handina kukwanisa kupfuura nyaya yengoma, iPhone 7 ichapa maawa maviri mamwe hupenyu hwebhatiri kupfuura iPhone 6s, nepo iyo iPhone 7 Plus ichizopa 1 awa yakawanda kupfuura iyo iPhone 6s Plus. Parizvino chimbo cheIOS chine bhatiri rakanyanya ndiyo nguva.
Iyo iPhone 7 Plus ichatanga kubva ku32GB, uye inodhura kubva $ 650 muUSA, € 749 muApple Chitoro kuSpain.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyi ndiyo iPhone 7, ese maficha echishandiso chitsva
Ivo vanotaura nezvese zvishoma nezve bateriaaa, uko iri nzvimbo isingazivikanwe yeapuro!
Chekutanga kukwazisa pamusoro pechinhu chakakosha chandakateedzera kwemakore mazhinji pane ino peji. Kana iri yangu maonero pane iyo iPhone 7 yakanaka, ivo vakaigadzirisa mune zvese kunze kwekugadzirwa kwakaramba kwakangofanana, asi ini handizvide kana.
- Hupenyu hwebhatiri, mamwe maawa maviri.
- Simba neiyo processor nyowani.
- Kuramba kumvura uye guruva, ziva kuti izvi zvakakosha.
- Kuvandudza bhatani repamba.
- Iwo matsva mavara matema.
Icho chiri chekuda kuziva kuti vazhinji venyu vaifarira iyo inopenya nhema nhema, iyo matte nhema inokwezva kutarisa kwangu zvakanyanya.
Handifunge kuti ndaizoitenga, nekuti yangu iPhone 5s iri kuita mushe uye ini handina chikonzero chekuichinja. Kunze kwegore rinotevera nderegumi regumi yeiyo iPhone uye ivo vanonyatso kuburitsa imwe nyowani iPhone, kunyanya mukugadzira uye ini ndinosarudza kumirira rinenge rimwezve gore.
Asi hei, chakanyatso kundibata maAirPod, ipfuurei.
Kunyanya, haugone kushandisa mahedhifoni uye kuchaja foni panguva imwe chete? Ndini ndoga here ndinoita kunge gororo?
Pindura kuna Lukatonik09
Pos a kana pakutanga chandaifarira zvakanyanya ndechekuti HAIWONZE. Zvakaipa kuti kutora mukana wekutadza kwevamwe hausi iwo mutoo weApple, kuti dai Samsung nemakwikwi, tingadai takave nekuseka kwakanaka.
Haugone kushandisa wired mahedhifoni uchichaja chishandiso ???? Wow…
Chokwadi mumwe mugadziri anotora adapta kuti akwanise kuchaja chishandiso uye kushandisa mahedhifoni panguva imwe chete.
Ndanga ndichiwana zvizvarwa zvishanu zvekupedzisira zve iPhone uye zvirokwazvo ndakabata iyo 5, nekuti imwe yetemu yangu iri kufa.
Asi ini ndinofunga ndinofanira kubvunza: haufunge here kuti kubvira Steve Jobs paakasiya, Apple yamira kugadzira? Ivo vanoramba vachiburitsa zvigadzirwa zvinoshanda kusvika kurufu, hongu, asi dzese nhau dzavakazivisa yeiyo iPhone7, dzaive dzatove mune mamwe mafoni.
Sezvo Steve Jobs akabatana zvakare nevashandi veApple, izvo zvigadzirwa zvakaburitswa zvagara zviri zvigadzirwa zvekusiyanisa, mhando uye INNOVATION. Ivo vagara vaunza chimwe chinhu kumusika chakavaita ivo vakasarudzika. Zvisinei, panguva ino ini handizvione saizvozvo.
Ndinovimba ivo vari kuzvichengetera ivo veiyo iPhone 2017, nekuti kana zvisiri, ndinotya kuti iyo nyowani yekudyara yeApple yakafa pakapererwa nemazano eanonoka Steve Jobs, ayo anga achinyatso kuputika kusvika zvino.
Ngatibatei huni ...
Apple inopa iyo AirPods, smart headphones zviri nani kupfuura zvataitarisira
Apple Watch Series 2, inogara mumvura, isina dhizaini nyowani